Mayelana NATHI | Yiwu Muran Ukungenisa Nokuthekelisa Co., Ltd.
I-Yiwu Muran Import And Export Co, Ltd. yasungulwa ngo-2009, yahlanganisa ukuthuthukiswa nokuthengisa ndawonye. Imikhiqizo yethu eyinhloko ifaka ibhulashi lezimonyo, ibhulashi lezimonyo, ubuhle besiponji blender, amathuluzi wokwenza, neminye imikhiqizo ehlobene. Sinikezela ngamabhulashi kumakhasimende ethu emakethe yezilwandle. Ngabasebenzi abangama-90 efektri yethu, ngemizamo yabasebenzi bethu, sesingumkhiqizi webhulashi wezimonyo owaziwayo futhi onokwethenjelwa. Ngobungcweti bokusebenza, sisebenzisa kuphela izinto zokulondolozwa kwemvelo, sisebenzisa isilawuli esigcwele sokulawulwa kwekhwalithi ekwakhiweni, sizame ngokusemandleni ethu ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo omuhle kakhulu. Nethimba labaklami abangochwepheshe, sethula nyangazonke amamodeli amasha angama-20 amabhulashi wezimonyo alandela eduze ukuthambekela kwemfashini. Siyakwazi ukuhlinzeka ngamamodeli ahlukahlukene ngokwezifiso zakho, futhi sinikeza nensizakalo ye-OEM ne-ODM. Ithimba lethu lokuthengisa lizolandelela eduze yonke inqubekelaphambili eyodwa yayo yonke i-oda, lilandele noma iyiphi impendulo neziphakamiso zamakhasimende ethu ngemuva kokulethwa, futhi lixhumana namakhasimende futhi lisize ukuxazulula noma yiziphi izingqinamba. INHLANGANO yaseMURAN ibizinikela ekuletheni ukwaneliseka kumakhasimende ayo. Siyethemba ukubambisana nawe ukuze uthole izinzuzo ezifanayo futhi udale ikusasa lethu eliqhakazile ndawonye.
Inkampani yethu futhi ineqembu eligxile ekuhwebeni kwamanye amazwe, okungasiza amakhasimende ukuthi athenge imikhiqizo edingekayo, athenge, alandelele, ahlolwe ngekhwalithi, abhukhe, alayishwe nezinye izinsizakalo zokuthekelisa.
Ngokuya ngezidingo zokusungula uhlelo lwamanje lwamabhizinisi, i-Yiwu Foreign Trade Corporation ibambe iqhaza ekuguqulweni kwemishini yangaphakathi futhi yasungula nohlaka lokuphatha kwezesayensi. Ukuxhaswa okuncane kukahulumeni kwezinkampani zokungenisa nokuthekelisa
Sinesimodeli sokukhangisa esiyingqayizivele somhlaba wonke namakhono wenkonzo ephelele. Ngethimba eliqeqeshiwe, ukuphathwa okuqinile, imikhiqizo nemishini emihle kakhulu, kanye nesimo sengqondo esifaka phakathi futhi esivulekile, iqembu lizama ukudala "Ubuhle Bobuhle BaseMpumalanga Nabesifazane". Ubuhle nempilo isiko lobuhle baseNtshonalanga nobuhle baseMpumalanga buhlanganiswe ngokuphelele, kwakheka ubuntu obungajwayelekile nesitayela sobuhle baseMpumalanga. Umsunguli omuhle futhi okhulumisana naye "Ubuhle baseMpumalanga" uhlale edala isiko lobuhle obusha baseMpumalanga kwabesifazane.